होमस्टे के हो ? : RajdhaniDaily.com - होमस्टे के हो ?
Home Editor-Picks होमस्टे के हो ?
झन्डै दुई दशकअघि स्याङ्जा सिरुबारीबाट सुरु भएको थियो– गाउँ पर्यटन । अहिले त्यही अवधारणा ‘होमस्टे’मा परिणत भएको छ । ग्रामीण प्रवद्र्धन हेतुले सुरु ‘गाउँ पर्यटन’ अर्थात् ‘होमस्टे’को उद्गम थलो हो– सिरुबारी ।
त्यसो त, ‘होमस्टे’ अवधारण नेपालमा मात्रै हैन, अमेरिकालगायतका मुलुकमा पनि अघि बढेको छ । अमेरिका, अस्टे«लिया, यूरोपलगायत शक्तिशाली देशमा व्यापार र मनोरञ्जन उद्देश्यले ग्रामीण पर्यटनका गतिविधि भएका देखिन्छन्् ।
विकासोन्मुख मलेसिया र केन्याजस्ता देशमा व्यापार, उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘होमस्टे’ सुरु गरिएका छन्् । छिमेकी देश भारत र चीनमा यही अवधारणा सञ्चालनमा छन् ।
अहिले ‘होमस्टे’ सुविधा भएका गाउँ भ्रमण गर्दा सस्तोमात्र होइन, रमाइलो पनि हुन्छ । ‘होमस्टे’ सांस्कृतिक संगठनका रूपमा प्रचलित अंग्रेजी शब्द हो । जसले भ्रमण अथवा यात्राक्रममा ‘ग्रामीण भेगका घरमा बास बस्ने’ भन्ने अर्थ दिन्छ । यसले ग्रामीण क्षेत्र भ्रमणमा जाने पर्यटकका लागि स्थानीय खाना परिकार, रहन सहनसहित घरघरमा खाने, बस्ने व्यवस्था जनाउँछ । यसलाई परम्परागत संस्कृतिको आधुनिक रुप पनि मान्न सकिन्छ ।
हाम्रो समाजमा पहिले अध्ययनका लागि परदेश हिँडेका व्यक्ति, नुनतेल लिन जाने आउनेहरू रात परेपछि बाटैमा बास बस्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यतिबेला अहिलेजस्ता होटेल थिएनन् । बास बस्ने पाहुनालाई घरधनीले केही पैसा लिएर भाँडाकँुडा, दाउरा, पानी, नुनतेल दिने प्रचलन थियो । ग्रामीण भेगका कतिपय ठाउँमा बेलुकाको समय बास बस्न आएका पाहुनालाई आफ्नो भान्सा चुलोमा जे पाकेको छ, त्यही खान दिएबापत न्यूनतम रकममात्र लिने चलन अहिले पनि गाउँघरमा यदाकदा छँदैछ । यही चलनको आधुनिक रूप ‘होमस्टे’मा परिणत भएको हो ।
गुरुङ समुदायको बहुल क्षेत्र सिरुबारी नेपालकै पहिलो ग्रामीण पर्यटकीय क्षेत्र हो । यो क्षेत्र समुन्द्री सतहदेखि झण्डै दुई हजार फिट उचाईमा पर्छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तु प्रयोगबाट तयार गरिएका खानाले सिरुबारी पुग्ने पर्यटकलाई स्वागत र जैविक घरबास अर्थात् ‘होमस्टे’ले स्वागत गरिन्छ ।
स्याङ्जा सिरुबारी गुरुङ बस्तीका ३९ मध्ये २२ घरमा ‘होमस्टे’ सुविधा छ । बेलायती र भारतीय सेनामा जागिर भएका र रिटायर्डको बस्ती भने पनि हुन्छ– सिरुबारी । यहाँबाट हिमाल हेर्न डाँडामा चढ्नुपर्दछ । गाउँमाथि देउरालीबाट धौलागिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छे«देखि लमजुङ हिमालको लामो लर्कन देख्न सकिन्छ । डाँडा चुचुरो गोरुजुरेमा पुग्न सिरुबारीबाट करिब दुई घन्टा लाग्छ । सबैभन्दा अग्लो थुम्को जुरोबाट झन् राम्रो दृश्य देखिन्छ । डाँडामा डहरा ऋषिले आदिमकालमा तपस्या गरेका स्थलमा आश्रम छ ।
चिटिक्क मिलेको बस्तीलाई घरबास पर्यटनका अभियन्ता पूर्वसांसद क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङको विशेष पहलमा २०५४ सालमा ‘होमस्टे’ गाउँका रूपमा सिरुवारीमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । स्थानीयले गुरुङ जीवनशैलीको जीवन्त चित्रणका साथै मौलिक संस्कृतिका माध्यमबाट पर्यटकलाई न्यानो आतिथ्य प्रदान गर्ने गरेका छन्् । गाउँ सिरानबाट देखिने सूर्योदयका साथै सूर्यास्तका मनमोहक दृश्य सिरुवारी पुग्ने पर्यटकले हेर्न पाएका छन् ।
सिरुबारीमा घरबास कार्यक्रम सुरु भएयता देशभर त्यो लहर चलेको छ । पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशभित्रै सैयौं गाउँमा घरबास सञ्चालन भएका छन्् । पहिलोपटक घरबास पर्यटन सुरुवात गरिएको गाउँ भएका कारण घरबास सञ्चालनमा आएका धेरै गाउँले यहाँ आएर विविध पक्षबारे जानकारी लिने गरेका छन् । स्थानीयअनुसार दीवंगत क्याप्टेन गुरुङले २०२५ सालमै सिरुबारीलाई ‘पर्यटन गाउँ’ बनाउने सपना देखेका थिए । २०४८ सालदेखि उनले पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै आएका थिए ।
आत्मीय गाउँले व्यवहार, सरसफाइ एवं स्थानीय अर्गानिक परिकारको स्वाद तथा संस्कृति अवलोकन नै ‘होमस्टे’को मुख्य आकर्षण हुन् । सिरुबारीमा विभिन्न समूह ‘होमस्टे’ सञ्चालनबारे अध्ययन गर्न आउनेक्रम बढेसँगै आजभोलि ‘होमस्टे’ पाठशालाका रूपमा स्थापित भएको छ ।
ढुंगैढुंगाले छापिएका सफा एवं सुन्दर बाटो, परम्परागत शैलीमा निर्माण गरिएका घरमा सञ्चालित घरबास अनुभव लिन जाने जो–कोहीलाई गाउँको प्रवेशद्वारमै गुरुङ जातिको परम्परागत पहिरनमा सजिएका स्थानीय स्वागतले मन फुरुंग पार्दछ । बाँजागाजासाथ फूलमाला पहि¥याएर आमा समूह, युवा क्लब तथा पर्यटन समिति पदाधिकारीले पाहुनालाई गुम्बा दर्शन गराइ जलपान गराउँछन्् । त्यसपश्चात पर्यटकका लागि विभिन्न घर तोकिन्छ । तोकिएका घरमा पर्यटकलाई त्यही खानेबस्ने व्यवस्था गरिन्छ । साँझ ८ बजे पर्यटकलाई सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत मनोरञ्जन गराइन्छ भने भोलिपल्ट बिहान चियानास्ता खुवाएर ८ बजे फूलमालासहित बिदाई गरिनु यहाँको मौलिक पहिचान भएको छ ।
अहिले सिरुवारी स्याङ्जा आँधीखोला गाउँपालिका–१ मा पर्छ । सिरुबारी गुरुङ संस्कृति र सभ्यताको ऐतिहासिक र उर्बर क्षेत्र मानिन्छ । पाहुनाको सन्तुष्टिका लागि दिनरात खटिने भएकैले गाँउ देशकै पहिलो ‘नमुना पर्यटकीय गाउँ’ कहलिन सफल बनेको हो ।
नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको वातावरण सिर्जना हुन थालेसँगै ‘होमस्टे’मा अहिले विदेशीभन्दा स्वदेशीको आकर्षण बढ्न थालेको छ । कुल ३९ घर गुरुङ परिवार रहेको गाउँमा एकपटकमा करिब १ सय ५० सम्म अतिथि बास बस्नसक्ने क्षमताको छ ।
वार्षिक १० हजार नेपाली र करिब एक हजार विदेशी पर्यटक आउने गरेको समितिले जनाएको छ । यात्राक्रममा आँधीखोलाको दृश्य आनन्ददायी लाग्छ ।
पौराणिक लोककथाअनुसार अयोध्याका राजा दशरथको शिकार यात्राक्रममा दृष्टिबिहीन मातापितालाई तीर्थाटन गर्न खटमा बोकेर हिँडेका श्रवणकुमारको मृत्युपछि बिलौनामा बगेको आँसु नै आँधीखोला बन्न पुगेको थियो ।
स्याङ्जा कार्कीनेटाबाट सुरु भएर जिल्लाको मध्यभाग भई नागबेली आकारमा बग्ने आँधीखोलाको मोहक दृश्य सिरुवारी जाँदा पर्यटकले देख्न पाउँछन् । यहाँका महिला ‘गाँउलाई नेपालकै पहिलो नमूना ग्रामीण पर्यटकीयस्थल’ भनेर चिनाउँछन्् । यसका लागि उनीहरू मेहनतसाथ लागिपरेका छन्् ।
गाउँका प्रत्येक घरमा सफा शौचालय, चिटिक्क बिस्तरा, सोलार प्यानलजडित कोठा, सफा भान्सा देखिन्छन् । यी देख्दा सिरुवारी गाउँ कुनै सुमगस्थलजस्तो लाग्छ । ‘सबै सभ्य र सु–संस्कृत बनौं, घरआँगन सफा राखौं’ भन्ने अभियान नै चलाइएको छ । सिरुबारीले आफूमा थपिएको सुन्दरता र उचाई विश्वलाई देखाएको छ ।
आमाहरूको सक्रियतामा बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म गाउँ घुम्न आउने पर्यटकलाई बाजागाजा, फूलमाला र अबिरले आत्मिक स्वागत गर्छन् । यस्तो स्वागतले देशभित्रैका र बाहिरका पर्यटक पनि मख्ख पारिहेका हुन्छन्् । सिरुबारीमा न होटल छन्, न त कुनै रेष्टुरेण्ट नै । पर्यटकलाई समूहमा बाँडेर स्थानीय उत्पादनमा आधारित अर्गानिक खाना खुवाई, पारिवारिक वातावरणमा राख्ने परम्परा विकास गर्नुले नै सिरुवारीको लोकप्रियता हो ।
‘गाउँ पर्यटन’को पाठशालाजस्तो बनेको छ– सिरुबारी । देश–विदेशबाट ‘होमस्टे’ सिक्न यहीँ आइपुग्छन्् । पछिल्लो समय सरकारले ‘होमस्टे’ कार्यविधि लागू गरेपछि गाउँमा पर्यटनलाई बढवा मिलेको छ । गाउँगाउँमा ‘होमस्टे’ खोल्न तँछाडमछाड भइरहेको छ । सिरुबारीको ख्यातिले उनीहरूलाई हौसला मिलेको हो ।
अझ पश्चिम क्षेत्रका बाक्लो गुरुङ, मगर गाउँबस्ती भएको समुदायमा ‘होमस्टे’ अनिवार्यजस्तै भएको छ । घरबास सेवा सञ्चालनले आयआर्जनको बाटो खोली दिएको छ । सिरुबारीले ‘गाउँ पर्यटन’ सुरु गरेकै वर्ष मलेसिया क्वालालाम्पुरमा आयोजित कार्यक्रममा ट्राभल एसोसिएसन अवार्डसँगै २००१ मा एसियाकै ‘पाटा गोल्डेन अवार्ड’ पनि पाइसकेको छ ।
लमजुङको घलेगाउँ, भुजुङगाउँ, पासगाउँ, काउलेपानी होस् या पर्वतको चित्रे, डाँडाकटेरी, लेसपार या नवलपरासीको सिसवार, म्याग्दीको दोवा, कास्कीको ताङतिङ, घान्द्रुक, धम्पुुस, सिक्लेस, पचभैया, हेम्जाकोट, ल्वाङघलेल या तनहूँको बन्दीपुर, रानागाउँ, पाल्पाको बौघागुम्हा, कैलालीको भादागाउँ, गोरखाको बारपाक, रसुवाको बृदिम, काठमाडौंको कपन, मकवानपुरको चित्लाङ, काभे्रको बल्थलि, बर्दीया, कैलालीका थारु गाउँहरू सिरुवारीले देखाएको बाटो हिँडिरहेका छन्् ।
सिरुबारीको प्राकृतिक र ऐतिहासिक स्रोतसम्पदा अपार छ । यहाँको मानवीय स्रोत सम्पदा पनि उत्तिकै गतिशील बनाउन गाउँले कटिबद्ध छन्् । सिरुबारीको समाज ज्यादै मिलनसार र मेहनती छ । पर्यटकको उपस्थितिले गाउँमा रमाइलो वातावरण छ । घरघरमा पर्यटक राख्न पाउँदा गाउँले दंग छन् ।
गाउँ पुग्ने अधिकांश पाहुना नेपाली नै हुन्छन्् । विदेशी थोरैमात्र पुग्छन्् । हिजो शिक्षा, रोजगारी र अवसरको खोजीमा सहर च्यापिने या विदेशिने युवा अहिले बाहिर जानुभन्दा गाउँमै ‘रोजगारी हुन्छ’ भन्ने बुझ्न थालेका छन्् ।
ठुलो संख्यामा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक सिरुबारी पुग्छन्् । सबै किसिमका भौतिक पूर्वधारले सिरुवारी आर्थिक रूपमा सम्मृद्धितर्फ लम्किँदै छ । गाउँमा हेर्न र घुम्न अनेक वस्तु छन्् । मौलिक घर बनोट, बौद्ध गुम्बा, गुरुङ संस्कार, संस्कृति, स्थानीय जीवनशैली, अनुशासन, लगनशीलता, कला, सीप नौलो लाग्छन् ।
गाउँलेलाई पर्यटन व्यवस्थापनमा आकर्षित गराउन कुकिङदेखि स्वागत सत्कारसम्बन्धी तालिम गाउँ पर्यटन समितिले व्यवस्थापन गर्छ । जसले पाहुनाको चाहना र मागअनुुसारका सेवा दिन सजिलो भएको छ ।
सडक, पानी र बिजुली पुगेका गाउँमा विकासका नयाँ आयाम थपिँदै गएका छन् । पछिल्लो चरण नेपालमा ग्रामीण विकासका लागि ‘होमस्टे’को माध्यमबाट पर्यटन प्रबद्र्धनक्रम बढ्दो छ ।
यद्यपि, ‘होमस्टे’ सञ्चालन गर्न सजिलो भने छैन । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्यविधि ऐनअनुसार ‘होमस्टे’ सञ्चालन हुनुपर्छ । तर, कार्यविधि ऐन बेवास्ता गर्दै कतिपय गाउँमा ‘होमस्टे’ सञ्चालनमा छन् । ‘होमस्टे’को नाममा यस्ता सेवाले आन्तरिक अथवा बाह्य पर्यटकलाई ‘होमस्टे’ सुविधा नभएर होटलसरि व्यापार गरिरहेका छन् ।
‘होमस्टे’ पर्यटकलाई आवास, खाना र अन्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले निजी वा सामूहिक रूपमा सञ्चालन गरिने सेवा हो । यसको उद्देश्य पर्यटन क्षेत्रको प्रतिफल ग्रामीण समुदायमा पु¥याउने हो । साथै, ‘होमस्टे’ सञ्चालन गरी ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई पर्यटन सेवामा सहभागी गराउनु हो । सिरुबारी सिद्धार्थ राजमार्ग पोखरा, नौडाँडा, सेतीदोभान, कार्कीनेटा, बगाले हुँदै सिरुबारी पुग्न सकिन्छ ।
दोस्रो पोखरा, बाडखोला, दरौं, माझकटेरी र तेस्रो पोखरा, हेर्लङ, अर्जंनचौपारी हुँदै सिरुबारी पुगिन्छ । पोखरा–कार्कीनेटा–सिरुबारी ६४ किमि छ । पोखरा पृथ्वीचोकबाट बिहान १०ः३०, ११ र दिउँसो १ र २ बजे सिरुबारी जाने गाडी छुट्छन्् । गाडीमा पाँच घन्टा लाग्छ । बुटवलबाट करिब १५० किमि र स्याङ्जा सदरमुकामबाट २५ किलोमिटर दूरी यात्रा गरेपछि सिरुबारी पुगिन्छ ।
धनुषामा क्रसर उद्योगका सञ्चालक पक्राउ
जनकपुरधाम । धनुषा जिल्लाका सबैभन्दा ठूलो क्रसर उद्योगका सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका ६ स्थित रहेको कमला स्टोन क्रसर...
बिरामी नेताको अविरल यात्रा
अभि गनिमत है सव्र मेरा, अभि लवालव भरा नहीँ हुँ ... वो मुझको मुर्दा समझ रहा है , उसे कहो, मैं मरा नहीँ हु .. –...
काठमाडौं । गीतकार गीतकार सुष्मा देवकोटा र गायक राजसागरले नयाँ गीत ‘मुग्लानी छातीमा देश दुख्छ...’ को भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोनाका कारण विदेशमा...
खोलाले बगाउँदा तुलसीपुरमा एक महिलाको मृत्यु
तुलसीपुर । ग्वार खोलाले बगाउँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा कपुरकोट गाउँपालिका–६ जिबाङ निबासी ४२ बर्षकी तीलसरा सार्की रहेको ईलाका प्रहरी...